Hargeysa: Sidee Ayuu U Bilaabmay Kalkii Sagaallaad Ee Bandhigga Caalamiga Ah Ee Buugta Hargeysa? | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Hargeysa: Sidee Ayuu U Bilaabmay Kalkii Sagaallaad Ee Bandhigga Caalamiga Ah Ee Buugta Hargeysa?
Hargeysa (Hubaal) – Bandhiga Caalamiga ah Buugta Hargeysa ayaa shalay si rasmi ah uga furantay Hutel Guuleed ee Magaalada Hargeysa, iyada oo ay ka soo qayb galeen wufuud badan oo ka kala socotay Dunida, kuwaasi oo qaarkood madasha ka jeediyey hadal furitaan, qaarkoodna khudbada ka jeedin doonaan maalmaha soo socda. Bandhiga Caalamiga ah Buugta Hargeysa ayaa galay markii 9-aad, iyada oo sanad walba hal mar la qabto, isla markaana la qaato hal ku dhig lagu falanqeeyo sanadkaasi, waxaana hal ku dhiga sanadkan la qaatay uu yahay Hogaaminta iyo Hal-abuuurka. Wasiirka Wasaaradda Arrimaha dibada Somaliland Sacad Cali Shire oo khudbad ka jeediyey ayaa soo dhaweeyey wufuuda ka kala socota caalamka, isaga oo sidoo kale ka hadlay muhiimada uu leeyahay bandhigan caalamiga ah.
Dr. Sacad ayaa soo dhaweeyey martida iyo ka soo qaybgalayaasha Bandhigan waxaanu yidhi “Waanu idinku soo dhaweynaynaa Bandhiga Caalamiga ah ee Buugta Hargeysa ee aad uga soo safarteen kunmanaan ka kun ee Mayl”.
Wasiirka oo hadalkiisa sii wataa waxa uu intaa ku darya “Waxa sannadkan lagaga hadli doonaa Bandhiga Buugaagta Caalamiga ah ee Hargeysa mawduuc aad iyo aad u muhiim ah kaas oo ah “Hoggaaminta iyo Hal-abuurka”
Safiir Ku-xigeenka Dawladda Ingiriiska u fadhiya Itoobiya, qaabilsanna arrimaha Somaliland Cat Evans ayaa iyaduna hadal ka jeedisay Bandhiga Caalamiga ah Buugta Hargeysa waxaanay ka hadashay muhiimada bandhigani leedahay, iyada oo u mahadnaqday soo abaabulayaasha.
Safiirka ayaa waxa ay ka hadashay xidhiidhka Ingiriiska ee Somaliland iyo sidoo kale muhiimada hal ku diga sanadkan lagaga hadlayo bandhiga buugta Caalamiga ah ee Hargeysa, kaasi oo ah Hogaaminta iyo Hal-abuurka.
Safiirka ayaa waxa ay sheegtay inay ku hanwayn tahay inuu bandhiga buugta caalamiga ah ee Hargeysa horumar bulsho keeno, iyada oo arrimahaasi ka hadlaysa waxa ay tidhi “Hogaaminta iyo hal-abuurku waa halka bulsho laga horumariyo, taasina waa sababta aanu ugu han waynahay bandhiga buugta caalamiga ah ee Hargeysa”.
Safiirka ayaa ugu dambayn u mahadnaqday abaabulayaasha bandhigan, waxaanay tidhi “Waxaan u mahadnaqayaa Jaamac iyo kooxdiisa ee soo abaabushay bandhigan caalamiga ah”.
Macalin Siciid Saalax oo ka mid ahaa aqoon-yahankii ka soo qayb galay bandhiga Caalamiga ah ee Buugta Hargeysa ayaa khudbad uu ka jeediyey madasha waxa uu ku sharaxay hogaaminta iyo hal-abuurka, isaga oo taxay hogaaminta sida looga barto cayayaanka iyo xayawaanka, sidoo kale waxa uu ka sheeekeeyey dhaqankeena soo jireenka ah iyo halka ay hogaamintu kaga jirtay.
Macalinka Siciid Saalax oo ka hadlayey madasha Bandhiga Caalamiga ah ee Buugta Hargeysa waxa uu yidhi “Waxaan isku soo taagay inaan ka hadlo hogaaminta tolmoon iyo hal-abuurka, hogaaminta bulsho, suugaan iyo hal-abuuurku wuu dheehan yahay, hogaamin markaan ka hadlayo maaha kaliya Soomaalida iyo bani aadamka”.
Sidoo kale xaflada furitaanka ayaa waxa hadal ka jeediyey Dr. Xuseen M. Aadan, isaga oo ka hadlay doorka aqoontu ku leedahay hogaaminta iyo hal-abuurka oo ah hal ku dhiga sanadkan ee lagu falanqayn doono carwada bandhiga caalamiga ah ee buugta Hargeysa.
Bandhiga Caalamiga ah Buugta Hargeysa ayaa gashay sanad guuradii 9-aad, iyada oo la qabto sanad walba xilligan oo kale, iyada oo sidoo kale carwadan sanadlaha ah dhiirigaliso akhriska iyo qoraalka, waxaana waxyaabaha ku cusub sanadkan carwada ka mid ah in lagu soo bandhigay buug badan oo ay qoreen dad Soomaali ah, kuwaasi oo markii u horaysay ee la bilaabay Carwada aan la qorin ama dhiirigalinteeda aanay heli jirin qorayaashu.
Bandhigan oo socon doonta muddo lix maalmood ah ayaa waxa ay ku eeg tahay 28-ka bisha, mudadaa ay socotana waxa lagu soo bandhigi doonaa hal ku dhigyo, doodo iyo falanqayn ka hadlaysa Hogaaminta iyo Hal-abbuurka.